Location: musha » Mipimo yetsika
TravelNewsGroup yakazvipira kune yepamusoro-soro miitiro.
Hurukuro nekururama, kuperera zviri pakati pezvakakosha zvedu.
Vese vanyori veTN vanyori / vapepeti vese vakaungana vane mutoro wemaitiro ehunhu. Chero mushandi anoziva kuti mushandi biyake akatyora mutemo anofanira kukurumidza kuunza nyaya yacho kumupepeti wenzvimbo.
Kururama, Kururama uye Kururamisa
Iyo TravelNewsGroup inoyedza kushanda nekurongeka, huchokwadi, uye kuzvimiririra.
Pose pazvinoita, tinotsvaka maonero anopikisa uye tinokumbira mhinduro kune avo vane mufambiro unobvunzwa munhau.
Kunyange riri basa redu kunyatso taura nhau dzatinoziva, uye nekukasika mushure mekutaura nhau, tinofanira kuvandudza zvatinokwanisa kubva kudivi rinopikisa kana mamwe kumashure. Kana divi rinopikisa risingakwanisi kusvika, tinofanira kutaura izvozvo. Tinofanirawo kusimudzira mweya weruvengo mukutaura kwekutaura kwedu. Bato rinopikisa harifanire kunge richitarisirwa kupa mhinduro dzakasimba uye dzine mufungo kunyaya dzakaoma ipapo ipapo. Kuvandudza nyaya dzinofanirwa kuratidza kuti vacharamba vachigadziridzwa ne "Zvimwe zvinouya" kana zvirevo zvakafanana.
Tinofanira kuvavarira kugadzira kuenzanisa mune zvese zvekuvhara kwedu nepfungwa yekukurumidzira.
Kukanganisa kwese kuchabvumwa nekukasira nenzira yakatwasuka, isina kuvharwa kana kuvharwa munyaya inotevera. Muzviitiko zvisingawanzoitiki, nemvumo kubva kuMupepeti Mukuru, kana kuedza kukaitwa kubvisa zvisiri izvo (kana zvakaburitswa nekusaziva) kubva pawebhu. Kana kukanganisa kukaitwa online, isu tinofanirwa kugadzirisa zvikanganiso toratidza kuti nyaya yakagadziridzwa kugadzirisa kukanganisa kana kujekesa zvarinotaura. Tinogara tichibvuma kukanganisa kwedu uye tinogadzirisa zvinyorwa nenzira yakajeka.
Pakurangarira zvikumbiro zvekubvisa mashoko echokwadi mudura redu revanhu vose, hatifaniri kungofunga nezvokufarira kwomunhu kudzvanyirira zviri mukati asiwo kufarira kworuzhinji kuziva mashoko acho. Mamiriro ezvinhu anotungamira sarudzo uye inofanirwa kubvumidzwa neMupepeti Mukuru. Mutemo wedu hausi wekubvisa zvakatsikiswa mudura redu, asi tinoda kuti dura renhoroondo rive rechokwadi, rizere uye richifambirana nenguva, saka tichavandudza nekugadzirisa zviri mudura sezvinodiwa, kusanganisira misoro yenhau.
Tsanangudzo dzinofanirwa kuitwa kana nyaya, mufananidzo, vhidhiyo, zvinyorwa, zvinyorwa, nezvimwe zvichigadzira fungidziro yenhema yechokwadi.
Kana paine mubvunzo wekuti kururamiswa, kujekeswa kana kubviswa kwenyaya kana mufananidzo kwakakosha, hunza nyaya yacho kumupepeti.
Vatori venhau kana vatori vemifananidzo vanofanirwa kuzvizivisa kune venhau. Muchiitiko chisingawanikwe apo mamiriro ezvinhu anoratidza kusazvizivisa isu, Executive Edhita kana akakodzera mupepeti wepamusoro anofanirwa kubvunzwa kuti atenderwe.
Vatori venhau havafanire kunyepera, kungave kusimudzwa kwezvinyorwa zvemumwe munhu, kana kuburitswa kwenhau senhau pasina kuburitswa. Vatori venhau veSCNG vane basa rekutsvagisa kwavo, sezvavanoita pakutaura kwavo. Kuburitswa kwebasa remumwe nekusaziva hakurevereri kukopa. Kubiridzira kunozokonzera chirango chakakomba, uye chinogona kusanganisira kubviswa.
Kunyange hazvo vatori venhau vachitarisirwa kutora nhau zvine hukasha, havafanire kupindira nevakuru vehurumende pavanenge vari pabasa. Mutapi wenhau haafanire kutyora mutemo. Vatori venhau vanonzwa kuti vakarambidzwa zvisiri pamutemo kuita basa ravo vanotarisirwa kuti varambe vakadzikama uye nehunyanzvi uye vanoudza mamiriro acho kumupepeti wepamusoro nekukurumidza.
Kazhinji, tinofanira kudzivisa kushandiswa kwezvinyorwa zvisina mazita munyaya. Isu tinozopa ruzivo kune asina kudomwa mazita chete kana nhau dzichikosha mawaranti uye isingawanikwe chero imwe nzira.
Kana isu tikasarudza kuvimba neasina kutaurwa mazita, isu tinodzivisa kuvarega ivo chete hwaro hwechero nyaya. Hatizobvumiri masosi asina kutaurwa kuti aite kurwisa kwevanhu. Isu tinofanirwa kutsanangura iro risina kudomwa zita zvakadzama sezvinobvira kuratidza kuvimbika kwekwakabva. Uye isu tinofanirwa kuudza vaverengi chikonzero chakumbirwa kana kupihwa kusazivikanwa.
Maakaundi enhau dzemagariro anofanirwa kuve nemazita zvakajeka nezita resangano renhau, kungave padanho renzvimbo kana neSouthern California News Group.
Pakubuda nhau kuburikidza nesocial media, yekutanga positi inofanirwa kutorwa, uye mutori wenhau anofanira kujekesa kuti vari panzvimbo here kana kuti kwete. Kana ivo vasipo pachiitiko, ivo vanofanirwa zvakajeka - uye nekudzokorodza - kuburitsa ruzivo rwavari kuwana nezve chiitiko.
Kunokorwa kwamashoko kunofanira nguva dzose kuva mashoko chaiwoiwo akataurwa nomumwe munhu, kunze kwokugadziridza kuduku mugirama uye chirevo. Maparentheses mukati memakotesheni anenge asina kumbokodzera uye anogona kudziviswa nguva dzose. Ellipses inofanirawo kudziviswa.
Bylines, datelines uye kiredhiti mitsara inofanirwa kuendesa kune vaverengi iko kunobva kushuma. Nyaya dzese, kusanganisira pfupiso, dzinofanirwa kunge dziine mutsara uye ruzivo rwemunyori kuti vaverengi vazive wekubata kana paine chikanganiso kana nyaya.
Vatapi venhau vanoonekwa uye avo vanobata zvinoonekwa nhau zvigadzirwa vanozvidavirira nekusimudzira zvinotevera zviyero mubasa ravo rezuva nezuva:
Edza kugadzira mifananidzo inotaura chokwadi, chokwadi, uye zvisina tsarukano. Ramba kushandiswa nemikana yemifananidzo yakarongwa.
Kudhinda mifananidzo kubva muzvinyorwa zvakadhindwa uye zvepamhepo dzimwe nguva kunogamuchirwa kana mamiriro epeji rakadhindwa kana kubvuta skrini kuchisanganisirwa uye nyaya iri pamusoro pemufananidzo uye mashandisirwo ayo mukudhindwa kwakataurwa. Hurukuro nemvumo inodiwa.
Kuedza kwese kuchaitwa kuziva uye kutevedzera mutemo wevhidhiyo wenzvimbo yatiri kuvhara pamberi pekuvharwa kwehupenyu. Kana iyo vhidhiyo marongero achirambidza, panofanirwa kuve nenhaurirano yekuti ungaenderera sei nekuvhara.
Mibvunzo? Ndokumbira ubate yedu CEO-muparidzi / tinya pano